INDLU YETINTED HOUSE WINDOWS PROS AND CONS - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Indlu yeTinted House Windows Pros and Cons
Nasi isikhokelo sethu kwiifestile zendlu zewindows kunye neengozi kubandakanya iindleko kunye nokuba zikulungele na ukuba ngasese, ukukhuselwa kwe-UV kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Ngaba iifestile zendlu ezinombala zilungile kuwe? Ukukuqonda oko, kuya kufuneka wazi zonke iingenelo kunye neengozi zokufaka iifestile zendlu enombala.
Kule nqaku, siza kuhamba kuzo zonke iindleko kunye nezibonelelo. Siza kubandakanya iindleko zefestile yendlu kunye nento onokuyilindela kule mveliso ngokwemfihlo. Okokugqibela, siza kuchaza xa ukufota iifestile zendlu yakho kufanelekile, kwaye ukhethe nini esinye isisombululo.
isicakakazi sembeko kunye nesidima sokubekwa
Ukufaka ifilimu ngaphakathi kwefestile kunokufezekisa iinjongo ezahlukeneyo. Imiboniso bhanya bhanya ene-UV absorbers isebenza njenge-solar shades, kodwa musa ukwenza mnyama ukukhanya njengoko kungena endlwini.
Ifilimu ekhuselekileyo yefestile yefestile yomeleza iglasi ngomaleko wepolyester. Iifilimu zokuhombisa zefestile zinokudityaniswa kunye nebala ukuhombisa ifestile ngelixa ukhusela.
Uhlobo ngalunye lwefilimu yefestile ilunge kakhulu kwizicelo ezahlukeneyo, kodwa kukho izibonelelo ezithile ababelana ngazo.
Indlu yeTinted House Windows Pros
Indlu yeTinted House yeWindows Cons
Iindleko zokuThinta iWindows Window
Ukuprintwa kweWindows kwiNdlu
Ngaba ukuThimba kweNdlu kuneWindows?
Zininzi izizathu zokufaka iifestile zendlu ekhanyayo ekhayeni lakho, kubandakanya ukunciphisa inkcitho yamandla, ukukhuselwa elangeni, ukuba ngasese, kwanokhuseleko.
Iindleko ezincitshisiweyo zaMandla -Omnye wabona baqhubi basebenzise amandla asekhaya kukutshintsha kwamaqondo obushushu. Xa inkqubo yokufudumeza nokupholisa kufuneka ilwe nezinto ukuze kugcinwe intuthuzelo yekhaya lakho, isebenzisa amandla amaninzi.
Ehlotyeni, ukukhanya okuvela elangeni kutshisa umoya ngaphakathi kwekhaya lakho, kwaye amandla kufuneka achithwe ukulwa nobushushu.
Ebusika, ubushushu obuxabisekileyo obuveliswa yinkqubo yakho yokufudumeza bubaleka ngeglasi bangene kumoya obandayo ongaphandle, ofuna amandla ngakumbi ukugcina ubushushu obufanayo.
Iifestile ezinombala ziwenza lula umthwalo kwiinkqubo zakho zokufudumeza nokupholisa ngokunciphisa amandla emozulu ukutshintsha ubushushu bangaphakathi kwikhaya lakho.
Xa ilanga libetha kwiifestile ezinombala, ubushushu belanga buyavaleka kwaye ikhaya lakho lihlala lipholile ngaphandle kwamandla amancinci. Ngobusuku obusika obusika, ifilimu yenza isithintelo esongezelelweyo sokukhusela, ukuvumela ukushisa okuncinci ukuba kuphume ngeefestile zakho. Funda ngakumbi ngokwahlukileyo iintlobo zeefestile kwikhaya lakho apha.
Ukukhuselwa kwe-UV -Imitha yelanga ye-ultraviolet enamandla ibangela ukonakala kunye neenyembezi phantse kuyo yonke into. Ngelixa ifanitshala yangaphandle, ipeyinti, kunye nebala lenzelwe ukuma elangeni, iimveliso zangaphakathi azihlali zibandakanya olu khuselo.
Njengokuba nabani na onefestile enelanga anokungqina, iglasi eqhelekileyo ayiyithinteli imitha yelanga eyonakalisayo. Nantoni na ngaphakathi endlwini yakho esemendweni welanga njengoko idlula isuka empuma isiya entshona isesichengeni sokuphela kunye nokonakala.
iikhabhathi zeenkuni ezimnyama
Zimbini iindlela zokukhusela imixholo yekhaya lakho kwimitha yelanga yelanga. Inye kukufaka ifilimu ecacileyo ngesixhobo esifunxa i-UV.
Oku kunceda ukunciphisa umda wokukhanya kunye nobushushu obungena ekhaya. Ezi bhanyabhanya zicacileyo zihlala zibizwa ngokuba zii 'solar shades', kwaye nangona zingazenzi mnyama iwindow, zithathwa njengee-tints zefestile ngenxa yamandla abo okuthintela ilanga.
Ifilimu yewindow enombala okanye i-tint efakiweyo ayifunxi nje ukukhanya kwe-UV njengoko igqitha kuyo, iyayithintela ukuba ingangeni ekhayeni lakho. Ifilimu yefestile enombala ibonelela ngokhuseleko olugqwesileyo kwaye iya kunceda ukugcina ikhaya lakho lipholile.
Olunye uncedo lokhuselo oluhle lwe-UV luyacuthwa kwilitha ngaphakathi kwekhaya. Izikrini esichitha ixesha elininzi kuzo zinokungasetyenziselwa ukukhanya kwelanga. Oku kunokubangela ukuba uzobe kumakhethini kwiofisi yakho yasekhaya ukuze ubone ispredishithi, okanye unciphise i-shades kwigumbi lokuhlala ukuze ubambe umdlalo wosuku kwiTV.
Ngefestile enombala, ungazigcina zivulekileyo ezo windows, ukonwabela okukujikelezileyo kwaye uvumele ukukhanya kwendalo ngelixa usebenza okanye udlala.
Ukuba bucala - Ngexesha lasemini, ifilimu yefestile etyheliweyo iya kubuyisa ukukhanya kwelanga eyadini yakho, yenze kube nzima kubantu bangaphandle ukuba babone. Nokuba ilanga alikhanyisi, umbala omnyama ubonelela ngasese ngokunciphisa inani lokwahluka okubonakalayo, okwenza ukuba Kunzima kubantu abadlulayo ukukhetha ngokucacileyo iinkcukacha zento eyenzekayo ngaphakathi.
Ukhuseleko Ifilimu yewindow yezokhuseleko, efumaneka kwiindidi ezicacileyo nezinombala, inika ukhuseleko olongezelelekileyo kwiifestile ezaphukileyo.
Nokuba ivela kwinqindi lomntu oza kuba ngumgqekezi okanye isebe lomthi elijike lajikwa kwisaqhwithi samva nje, imigca yeefestile enefilimu yezokhuseleko iphakama ngcono ukonakalisa kuneefestile ezingakhuselekanga.
Ukhuseleko olongezelelekileyo luvela kumaleko weplastikhi omncinci onika inkxaso kwiglasi ngexesha lempembelelo. Ukuba ifestile iyaqhekeka, umonakalo weglasi uya kuba mbalwa, njengoko ifilimu yefestile inceda ukuba ingabhabhi iziqwenga ezahlukileyo. Ngesi sizathu, iyathandwa kwiindawo ezichaphazeleke kwinkanyamba.
Iwindows enombala sisisombululo esifanelekileyo kwiingxaki ezininzi. Ukuba ufuna ukugcina amakhethini akho evulekile ngaphandle kokuziva ubhenciwe, khusela imixholo yekhaya lakho kumonakalo we-UV, kwaye ugcine kwimali yamandla, inokuba yile nto uyikhangelayo.
Kukho iingxaki ezinokubakho ezinxulunyaniswa nefestile yendlu. Cinga ngezi zinto ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela unolwazi.
Kukhuselekile kakhulu kwi-UV -Ukuba uhlala kwindawo yehlabathi engafumani langa lininzi, ifuthe lemitha yelanga kwimpahla yakho incinci.
Ukongeza, ezinye iindawo ezibandayo zixhomekeke kubushushu belanga ukongeza ukufudumeza kwazo. Ukuba kunjalo kwikhaya lakho, unokufumanisa ukuba kuyabanda kakhulu emva kokuba kufakwe iitayile zeewindows. Umcebisi wefestile owaziwayo kufuneka akwazi ukukunika iingcebiso ezifanelekileyo, ezilungiselelwe imeko yakho.
Iindleko ezongezelelweyo -Ukuthinta iifestile zendlu yakho akusimahla. Ifuna, ubuncinci, ukuthengwa kwezinto kunye nexesha lakho kunye nomzamo wokufaka ifilimu yefestile.
Ukuba ukhetha ufakelo lobungcali, uya kongeza iindleko zabasebenzi kuhlahlo-lwabiwo mali. Khumbula ukuba awunyanzelekanga ukuba uthinte ifestile nganye ekhayeni lakho ukuze uvune uninzi lwezibonelelo zeefestile zendlu ezihonjisiweyo.
Uluhlu lwamaxabiso efilimu efestile yefestile iphakathi kwe- $ 2 kunye ne- $ 14 ngonyawo wesikwere. Iifilimu zefestile ezingabizi kakhulu zezona zisisiseko.
Zingajolisa ikakhulu ekunikezeleni ngasese okanye ukhuseleko lwe-UV, kodwa hayi zombini. Kwinqanaba eliphezulu loluhlu, uya kufumana ukhuseleko lwefilimu nge-UV yokuthintela kunye neempawu zabucala.
Ungayifaka ngokwakho ifilimu yefestile, kodwa kukungcakaza. Ifilimu inamathela kuyo yonke into, kubandakanya nayo, isenza kube nzima ukubambana ngefestile. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kufuneka isetyenziswe ngokugqibeleleyo okanye uyakushiyeka nemibimbi kunye namaqamza angabonakaliyo. Abafaki abaqeqeshiweyo baqinisekisa iziphumo zokugqibela.
Uluhlu lwamaxabiso emisebenzi ukufakela iifestile zendlu ezinombala zahluka ukusuka kwi- $ 1 ukuya kwi-5 yeedola ngonyawo wesikwere. Kuhlala kukho intlawulo encinci yemisebenzi eyi- $ 250. Abafaki beengcali banokufikelela kwimathiriyeli enesaphulelo.
Umgangatho, iifestile ezisicaba zezona zitshiphu kwaye kulula ukuzigquma kwiifilim zefestile ezinombala. Iifestile ezincinane kakhulu okanye ezinkulu, zakhiwe ngamaqhekeza amancinci eglasi, okanye ezimile ngokungaqhelekanga kunzima ngakumbi ukusebenza nazo, kwaye iindleko ezongezelelekileyo ziyasebenza.
Ixabiso eliphakathi lesicelo sobungcali befestile yewindows ukuya ezintlanu ubungakanani obuqhelekileyo windows yi- $ 350.
Xa usenze ngokufanelekileyo, awuyi kuqaphela ithendi kwiifestile zakho, zizibonelelo nje ezizisiweyo. Xa ifakelwe ngokungachanekanga, ifilimu yefestile enombala iba liva kwicala lakho, njengoko uya kuqaphela ukungafezeki konke.
Ukuba ufuna ukugcina kwiindleko zokufaka, kwaye uzenzele ngokwakho, ziqhelanise nobuchule kwiwindows encinci ebonakalayo endlwini ngaphambi kokuba ujongane iifestile zemifanekiso kwigumbi langaphambili.
Ngexesha lasemini, iifilimu ezibunjiweyo nezibonisayo ezisetyenziswa kwiifestile zibonelela ngasese, njengoko ukukhanya okuvela elangeni kubuyiselwa emehlweni abo nabangaphandle kwekhaya.
Ebusuku, xa ukukhanya kuvela ngaphakathi ekhaya kwaye akukho langa lokuzibonakalisa, iifestile ezinombala azinakubonelela ngenqanaba elifanayo labucala. Kule meko kungcono ukuba ukhethe enye yeendlela ezahlukeneyo iintlobo zamakhethini kwimfihlo engcono.
Nangona kunjalo, nabani na ojonga kwiglasi enombala uya kuba nexesha elinzima lokukhetha iinkcukacha ngenxa yokuncipha kokwahluka kombala.
Phantse naliphi na ikhaya linokuphuculwa ngokongezwa kweefestile ezinombala, kodwa ngaba ukuphuculwa kufanelekile? Oko kuxhomekeke kwiimeko zakho.
Ukuba uxhomekeke elangeni ukongeza inkqubo yakho yokufudumeza, iifestile ezinombala zinokunyusa iindleko zakho zamandla endaweni yokuzithoba. Kwimeko apho, kuya kufuneka ulinganise ubumfihlo, ukhuseleko, amanqaku okhuseleko e-UV ngokuchasene nobushushu obinciphileyo elangeni.
Olu tyalomali lwexabiso eliphantsi lunokusombulula iingxaki ezininzi ngaxeshanye, kwaye phantse kufanelekile ngalo lonke ixesha. Ifilimu efestile yefestile ihlala ihlala phakathi kweminyaka emihlanu kunye nesithandathu, ke ukuba kuya kufuneka ubeke endaweni windows ngaphakathi kwelo xesha kusenokwenzeka ukuba ulinde.
Ukongeza, ukuba uneefestile ezindala zeglasi ezingalinganiyo ngokulingana, ifilimu yefestile iya kuba nzima ukuyifaka kwaye ayinakuhlala ixesha elide ifilimu isetyenziswe kwiglasi enomsindo esetyenziswe kwiifestile ezintsha.
Kwikhaya elineefestile ezintsha ezinokufudumeza ngenxa yokuvezwa lilanga, iifestile ezinombala ziluncedo kakhulu. Ayizukufaka kuphela iifestile ezinombala ezantsi ukuthoba ubunzima kwinkqubo yakho yokupholisa, ikhaya lakho liya kuba yindawo emnandi ngakumbi ukuchitha ixesha xa ilanga lingakhanyi emehlweni akho.
Ukufumana umxholo ofanayo ngakumbi ndwendwela iphepha lethu malunga iintlobo zeefestile zefestile .
kude nodonga izimvo zomtshato
indlela yokucwangcisa isidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa
Umakhulu kamtshakazi unxiba ii-nordstroms
tshintsha igama lakho ecalifornia